စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များအတွက်အစီအစဉ်ကို - PROGRAM တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်း - 2019
အဆိုပါ OS ကို 10 windose developer များကို interface ဘာသာစကား, input ကိုနှင့်ဒေသခံနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအ parameters တွေကိုအတွက် configuration ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မည်သည့်အချိန်တွင်နိုင်စွမ်းကဆက်ပြောသည်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များအသုံးပြုသူအချိန်နှင့်အသိပညာတွေအများကြီးမလိုအပ်ပါဘူး။
10 windose အတွက်ဘာသာစကားအထုပ်တစ်ခုကိုထည့်ပေါင်းခြင်း
ပြီးသားပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအလွယ်တကူဘာသာစကားကို setting များကိုပြောင်းလဲပစ်။ windose 10 ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်သင့်လျော်သောဘာသာစကားဒြပ်စင် download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ ဒီလည်ပတ်မှုစနစ်၏စံ tools တွေသုံးပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဘယ်လိုကြည့်ရှုကြပါစို့။
Windows 10 ကိုအတွက်ဘာသာစကားအထုပ်ကိုတပ်ဆင်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ပထမဦးစွာကျွန်တော်ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် "Control Panel ထဲက"။ ဤအမီနူးပေါ်တွင် right-click နှိပ်. လုပ်ဆောင်နိုင်တယ် "Start".
ထို့နောက်အပိုင်းကိုရှာဖွေ "ဘာသာစကား" ထိုသို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်း - နှိပ် "ဘာသာစကားတစ်ခုကို Add".
ဘာသာစကားအထုပ်၏တစ်ခုလုံးကို set ကိုများထဲတွင်ဂျာမန်ဤကိစ္စတွင်အတွက်, သင်၌စိတ်ဝင်စားပစ္စည်းကိုရှာဖွေ, နှင့်ကိုနှိပ်ပါ "Add".
ယင်းကဆက်ပြောသည်ဒြပ်စင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဘာသာစကားများများ၏စာရင်းတွင်ဤလုပ်ရပ်များပြီးနောက်။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Options ကို" အသစ်-added မူပြောင်းခြင်း၏ရှေ့။
ဒြပ်စင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဘာသာစကားတစ်ခုကို pack ကို Download လုပ်ပြီး install".
ထိုလုပ်ငန်းစဉ်သစ်ကိုအထုပ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install ပြီးဆုံးသည်အထိစောင့်ပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Windows 10 ကိုအတွင်းဘာသာစကားပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို